Duqa Muqdisho oo Daah furay Ololaha Iskutashiga ee wax u qabashada dadka Barakacayaasha ah – Radio Daljir
Maarso 16, 2018 4:51 g 0
Guddoomiyaha gobolka Benaadir ahna Duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) oo daah furay ololaha isku-tashiga ee wax lagaga qabanayo dhibaatooyinka dadka barakacayaasha ayaa ku bogaadiyey bulshada Gobolka sida ay ugu istaageen wax u qabashada dadka danyarta ah.
Guddoomiyaha ayaa tilmaamay in isku tashiga iyo wax wada qabsiga bulshada ay asaas u tahay qorshe yaasha lagu xallinayo dhibaatooyinka haysta barakacayaasha ku nool gobolka Benaadir, maadama ay tahay arrin loo baahnayahay in ay u midoobaan maamulka iyo shacabka.
“Waxaan dhammaanteen wada aaminsannahay muhiimadda ay leedahay in dadkeenna barakacayaasha ah ee duruufta adag la nool aynu garab siinno, taasina ma imaaneyso haddii aan ku tiirsanaanno deeq bixiyaasha oo kaliya. Waa in aan cududeenna u mideynaa sidii aan nolol karaamo leh ugu abuuri lahayn walaalaheen.”
Eng. Yariisow ayaa sheegay in barakacayaal kor u dhaafaya shan boqol oo kun oo qof ay ku noolyihiin gobolka Benaadir, badan-kooduna ay ku tiirsan yihiin shaqo maalmeed ay kala soo baxaan nolol maalmoodkooda, balse bisha barakeysan ee Ramadaan uu soo food saaro culeys la xiriira fulinta shaqooyinkas iyagoo sooman.
“Same-falka waxa si weyn noogu booriyey diinteenna suuban, sidaas darteed waa in kaalin muhiim ah ka qaadanna sidii aan afurin ugu sameyn lahayn kumanaanka barakacayaasha ah ee gudanaya waajibaadka soonka, waana arrin kor u qaadaya dareenka walaaltinimo ee aynu u hayno dadka danyarta ah.”
Guddoomiyaha Gobolka ayaa tilmaamay in afarta sano ee soo socota mudnaanta la siin doono sidii dib u deegaameyn dhammeystiran loogu sameyn lahaa barakacayaasha, isagoo ugu baaqay dhammaan shacabka in kaalin muhiim ah ay ka qaataan xal u helidda barakacayasha, maadaama ay kaalin muhiim ah ay ka qaadan karaan koboca dhaqaalaha iyo horumarka gobolka.